I-HP inquma ukukhipha iWebOS | Kusuka kuLinux
I-HP inquma ukukhipha iWebOS
Ezinyangeni ezedlule kuthiwe inkampani kungenzeka yanquma ukuyeka ukusebenza kuyo isistimu yokusebenza yeselula, kodwa ekugcineni uthathe isinqumo soku ukunikele ifomu khulula.
Ngemuva kwakho konke, ukuyinikeza njengesoftware yamahhala kuyabenza onjiniyela bangaphandle labo abasebenza kuyo, ngendlela eyehlisa kakhulu isabelomali esidingekayo ukuze i-WebOS iqhubeke iphila ngokuqina okugcwele kwama-smartphones namaphilisi.
Isikrini Sokuqalisa Isicelo se-HP webOS
Yebo, leplatifomu esekwe ku-Linux yamadivayisi eselula "izobuyela empilweni" futhi, kulokhu kuzalwa kabusha, i-HP izoyisabalalisa njenge-software yamahhala; Ngamanye amagama, i-HP izokhipha ikhodi yalolu hlelo lokusebenza futhi, ngokungeziwe, izoqhubeka nokunikela kuphrojekthi ngokwakha nokunikeza ukusekelwa, noma kunjalo, ngenxa yalokhu kuhamba, i-HP inethemba lokuthi ukuzalwa komphakathi wabathuthukisi emhlabeni iphrojekthi enikela ekukhuleni kwayo. Ngokunengqondo, eminye imininingwane kusamele iphothulwe ukuze iphrojekthi yeWebOS iphinde isebenze futhi, ngokwesibonelo, ngubani ozophatha lo mphakathi futhi asethe inkambo okufanele intuthuko ilandele.
Futhi imuphi imodeli yomphakathi efunwa yi-HP ye-WebOS? Ngokusho kwemithombo ye-Mashable, i-HP izofuna imodeli efana neFedora / RedHat, okungukuthi, i-HP izoligodla ilungelo lokunquma (nokuhlunga) intuthuko ezoba yingxenye yezibuyekezo zohlelo lokusebenza ezizosetshenziswa kwimikhiqizo evaliwe noma nge support (njengakwiRedHat).
Ngokombono wamakhasimende athenge iTouchPad, lesi simemezelo sisho ukuthi abasenayo idivayisi eyedwa futhi engasekelwa ngoba, okwamanje lo mphakathi uqala, kunengqondo ukucabanga ukuthi uhlelo lwe-WebOS ecosystem lusebenzela izibuyekezo nezinhlelo zokusebenza ze Lawa madivayisi. Futhi ingabe amanye amadivayisi we-WebOS enziwe nge-HP azofika? Ngokunikezwa kwalolu daba, i-HP ayiphawulanga ngalolu daba ngakho-ke, okwamanje, kunzima ukusho ukuthi amaphrinta alindelekile, noma ama-PC wedeskithophu ane-WebOS, abuyela futhi kuphothifoliyo yemikhiqizo i-HP enethemba lokuyethula ngolunye usuku.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-HP inquma ukukhipha iWebOS
Ubuntu TV Yini onayo engasekho?
I-KDE ngokubukeka kwe-Ubuntu ngenxa yeNeptune Ambiance